Johnson 5.5 HP Seahorse Tune-Up Project | Esasinenjini Isikebhe Motor yokulungisa
Kuthunyelwe ngu- Sean952 Ku-Mon, 09 / 11 / 2017 - 08: 15
Ukubophezela ku-unit ephansi
Ngibhekile yonke into ngokucophelela futhi ngingazi ukuthi kungani imoto yami yonke ibuye ifakwe konke ekhanda elingenhla likhululekile futhi livamile kepha ukuqala kokuqala kunzima kakhulu futhi uma uzama ukuvula umkhiqizo ngesandla kunzima kakhulu. Ayikho insimbi yokugaya noma engqongqozayo, akukho lutho olubonakala lukhona nje ukuthi alukho ukukhululeka okukhululekile ... noma yikuphi usizo olwesabekayo.
Kuthunyelwe ngu- ttravis NgoThu, 09 / 14 / 2017 - 11: 58
Ufake izimpawu ezintsha? …
Ufake izimpawu ezintsha? Ngezinye izikhathi izimpawu ezintsha zingenza izinto zibonakale ziqinile isikhashana. Kuyafana ne-impeller entsha. Inike amahora ambalwa ukugqekeza ubone ukuthi izinto ziyathuthuka yini.
Kuthunyelwe ngu- Sean952 NgoThu, 09 / 14 / 2017 - 21: 00
Ekuphenduleni Ufake izimpawu ezintsha? … by ttravis
Angibuyanga kabusha izimpawu noma
Angizange ngiphinde ngizibuyisele kabusha izimpawu zokunamathisela noma noma yikuphi ekamelweni elingaphansi ngakho konke ukuthi kungani ngididekile kakhulu.
Kuthunyelwe ngu- ttravis ku Fri, 09 / 15 / 2017 - 12: 00
Ekuphenduleni Angibuyanga kabusha izimpawu noma by Sean952
Kwenzekani uma uzama uku ...
Kwenzekani uma uzama ukuvula i-flywheel ngesandla, noma ukugoqa intambo nxazonke ukuze uzame ukubamba indlela edala endala?
Futhi kwenzekani uma uthatha i-unit ephansi bese uzama ukuyiqala?
Kuthunyelwe ngu- stubnt NgoThu, 03 / 22 / 2018 - 21: 17
kuphi ukubeka phansi lapho ubeka igebe lephuzu?
Ngishintsha amakhoyili namaphoyinti / umcengezi ku-1956 Johnson CD-13A 5.5hp amawele.
Ngizama ukusetha i-gamp nephuzu nesikhathi ngendlela ye-voltmeter.
Ubeka kuphi i-throttle ukuhlola isikhathi bese usetha igebe lephuzu? Ngibonile abanye bethi abenzi lutho, kanti abanye bathi WOT. Abanye bathi akwenzi mehluko, kepha lokho akwenzi mqondo kimi.
I-throttle ishukumisa ipuleti kanye namanothi okugcina isikhathi, ngakho kufanele wenze umehluko lapho i-throttle ikhona khona.
Yini engilahlekile? ngiyabonga
Kuthunyelwe ngu- i-raysmythe Ngo-Tue, 04 / 03 / 2018 - 13: 26
Ekuphenduleni kuphi ukubeka phansi lapho ubeka igebe lephuzu? by stubnt
Ngenza nje i-3 hp lightwin ...
Ngisanda kwenza i-3 hp lightwin okokuqala futhi leyo sorta yangiphonsa ngaze ngabheka ngabona ukuthi yize ipuleti lihamba maqondana nekham, amaphuzu ahlala nekham, ngakho-ke akunandaba. Empeleni, uma udlula umaki wakho ngenkathi ubeka isikhathi, uma uqale endaweni "yokuqala", ungahambisa amaphuzu akho ngaphesheya kwekham kunoma iyiphi indlela. Noma kunjalo, nginqume ukungasinaki lesi sikhundla futhi lapho sengiqedile, imoto engiyitholile mahhala igijime njengaphezulu ... cishe ama- $ 30 ezingxenyeni zokulungiselela.
Ngakho-ke, iqiniso, akunandaba, kepha kungaba lula kakhulu kwezinye izikhundla kunezinye, ngokuya ngomsebenzi osuwenzile. Izithuthi ezijabulisayo!
Kuthunyelwe ngu- tonyr123 Ku-Mon, 04 / 01 / 2019 - 09: 59
I-1958 5.5 uJohnson
Ngibuyisele yonke into endaweni yayo, iyunithi ephansi, ama-gaskets amasha ku-carburetor, kanye ne-plug entsha. Ibaleke umzuzu nje bese ifa okokuqala futhi okwesibili vele uqale ngendlela efile.
Ngicela othile angisize ....
Kuthunyelwe ngu- Fischer Ngo-Tue, 04 / 16 / 2019 - 20: 56
1960 Johnson SeaHorse Usizo lwe-CD-17 Power Unit
Ngijabule ukubuyisela i-1960 Johnson Seahorse 5.5 yami
Ngize emgwaqeni ovimba umgwaqo. Awutholi muntu ozohlukanisa ikesi futhi ucije amasilinda bese ushintsha ama-piston namasongo. Ngizimisele ukuzama ngedwa uma ngingahlawulisa nama-piston namasongo.
Siyabonga kusengaphambili ngosizo lwakho.
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ngo-Wed, 06 / 12 / 2019 - 14: 49
I-Johnson 5.5 HP 4 ingxenye ubuyisele ividiyo
Umuntu othile ushiye amazwana athi befuna i-video engxenye ye-4 ye-youtube ekubuyiseleni iJohnson 5.5. Amazwana woqobo alahlekile ngoba ngixubule le sayithi (kwesinye isikhathi kuyenzeka) futhi bekufanele ngibuyise kusuka kusipele ebesinezinsuku ezimbalwa ubudala.
Ngicabanga lokhu ukusesha kwe-youtube uzothola amavidiyo owawafunayo.
Ngizothatha isikhathi sokubukeza lokhu kamuva futhi mhlawumbe engeza kule sayithi.
Uxolo, ngilahlekelwe ukuphawula kwangempela.
Kuthunyelwe ngu- I-Paramount1953 Ngo-Tue, 09 / 24 / 2019 - 19: 41
Ikhodi yombala wokupenda we-1958 5.5 hp CDL-15 motors?
Ngabe ukhona laphaya owazi ikhodi yangempela yombala wepende yemoto enombala we-maroon 1958 Johnson 5.5 hp CDL-15? Futhi uma kunjalo, kuyini? Ngiphakathi nokwakha kabusha le moto enhle futhi ngemuva kokujula ngijule enqoleni nginqume ukuthi, "Yini kanti? Kungenzeka ukuthi ngiyipende manje futhi." Noma yiluphi usizo kulokhu luzothokozelwa kakhulu. Ngiyabonga!
Kuthunyelwe ngu- indwangu yezindwangu Ngo-Wed, 09 / 25 / 2019 - 07: 59
Ekuphenduleni Ikhodi yombala wokupenda we-1958 5.5 hp CDL-15 motors? by I-Paramount1953
ungaqiniseki ikhodi yepende, kodwa…
ungaqiniseki ngekhodi yokupenda, kepha ngithenge upende ngezansi kwesixhumanisi futhi ngiphinde ngithole kabusha i-1955, kwavela kahle. umfana uneminye imibala futhi.
Kuthunyelwe ngu- thokozan2000 Ngo-Wed, 07 / 15 / 2020 - 00: 54
I-Vintage / Classic Outboard…
I-Vintage / Classic Outboard Motor Paint - I-Spray Can JOHNSON OEM Matching Colors
ku-EBAY! ngithengele le mibala eyami futhi FUTHI ngathola izitika zonke kusuka ku-ebay, ama-decals abengu- $ 50.
i-holide yethusi futhi imhlophe efudumele. Ama-dollar angama-20 ama-can
Kuthunyelwe ngu- indwangu yezindwangu Ngo-Wed, 09 / 25 / 2019 - 07: 53
udaba lokuguqulwa kwepayipi
Ngenze ukuguqulwa kwepompo kaphethiloli ku-1955 5.5 HP Johnson Seahorse kusuka ethangini elinengcindezi kuya ethangini lesitayela se-siphon. Udaba olulodwa engilutholile ukuthi umugqa we-vacuum ovela kokudla uzogcwaliswa ngegesi ngemuva kwehora elingu-1/2 lokusebenza. lokhu kuzokwenza ukuthi ipompo likaphethiloli liyeke ukudonsa ngenxa yokushoda kwepulse vacuum kusuka emgodini kaphethiloli kulayini. Ngabe ukhona omunye umuntu owake waba nale nkinga, noma walungiswa kulokhu?
Ingabe ukuguqulwa ngakunye kwemiyalo yokuxhumeka engezansi. ngiyabonga
Kuthunyelwe ngu- I-Paramount1953 Ku-Mon, 09 / 30 / 2019 - 20: 10
Ngiyabonga kakhulu ngemininingwane ephathelene nombala wepende wale "Seahorse" yango-1958. Ngifafaze ingubo yokuqala kapende esikhathini esifushane esedlule futhi iyoma njengoba ngithayipha lokhu. Le webhusayithi iyesabeka. Usuguqule iphrojekthi yami yokwakha kabusha kusuka ku- "rag tag" yaba iphrojekthi ethe xaxa "yobungcweti". Bheka okuhle! Ngiyethemba ukuthi ngizothumela isithombe kungekudala lapho sengiqedile. Ngiyabonga futhi.
Kuthunyelwe ngu- Stikman Ku-Mon, 06 / 08 / 2020 - 12: 18
Ukuvuselelwa kwetanki lamafutha
Ubaba wami wathenga i-5.5 hp (5514) entsha ngo-1957. Njengomlimi owayesebenza-holic ngendlela ayengayo, mhlawumbe sasiyisebenzisa kanye njalo ehlobo ngeminyaka yama-60 kanye nama-70. Besihlala singalali esibayeni selokhu ngaqeda esikoleni samabanga aphakeme ngo-1976. Ngisanda kusiphuca futhi ngihamba nezinqubo zakho ezinhle kakhulu. Benginombuzo wokufaka i-valve eyodwa yokuhlola ngesivalo se-vacuum. Iphrothokholi ayibonisanga ukuthi, noma cha, ukufaka esikhundleni sendlela ye-valve ngemuva kokufaka itheku elilodwa.
Omunye umbuzo wolwazi: Uhlelo lokuqala lwadala ingcindezi eya ethangini likaphethiloli. Manje sengifaka iphampu kaphethiloli ebizwa njengephampu ye-'pulse vacuum '. Kepha kubukeka sengathi ngiyinikeza ingcindezi ye-pulse, hhayi i-pulse vacuum. Ngakho-ke nginokunqamula kwengqondo kulokhu. Ngisola ukuthi wudaba lwamagama. Kepha ngicela ungifundise.
Ngenze ukuhlanza i-carb, ngenza ukuthuthukiswa kwetangi legesi, futhi ngisadinga ukwenza ukuthungela umlilo kanye ne-impeller, ngaphambi kweholide lika-Agasti. Izivumelwano zakho nezithombe kube ukuthunyelwa kukankulunkulu. Njengethokheni elincane lokubonga, nangokutholakala kwami ​​esikhathini esizayo, ngithanda ukwenza umnikelo wesikhathi esisodwa ekulondolozweni kwaleli sayithi. Ngingakwenza kanjani lokho?
Kuthunyelwe ngu- JD4801 Ngo-Sat, 07 / 11 / 2020 - 17: 38
Ngisebenza ku-1958 5.5HP…
Ngisebenza e-1958 5.5HP seahorse futhi nginazo izingqinamba nesikhathi. Izongena esikhundleni samaphoyinti kanye nama-condens. Bengibheka nomlandeli we-cam futhi njengoba ngiguqula isibambo se-throttle phansi i-cam roller ayihlali endaweni yamamaki endaweni ephakeme. Ekuphakameni okukhulu bekungaphenduki yonke indlela ngaphandle kokuthi ucindezela lapho ungavimba khona izilawuli ze-throttle emotweni. Noma yimiphi imibono ngokulungiswa kwe-cam roller. Ngingakwazi ukuwenza kusebenze kodwa kugijimisana futhi kuhlale kungagijimanga egiya noma kungasebenzi lutho olubi.
I-compression ilungile emotweni kuma-90 psi kuwo womabili amasilinda. Ngangenza i-carb tune ngayo futhi ngayihlanza futhi ngazifaka endaweni yazo zonke lezo zingxenye njengasezinyatsheni ezinikezwe lapha. Lokho kwasiza ithoni.